Gary Neville oo saddex xiddig oo ka tirsan Man United ugu yeeray kuwo lagu qoslo intii lagu guda jiray kulankii xalay ee Sheffield United – Gool FM
(Manchester) 25 Nof 2019. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa ku maadeystay saddex ka mid ah xiddigaha Red Devils, kaddib barbarihii ay xalay la galeen naadiga Sheffield United.
Gary Neville ayaa wuxuu ku kaftamay saddexda weeraryahan kooxda Manchester United ee Marcus Rashford, Anthony Martial iyo Daniel James, wuxuuna ku tilmaamay inay u muuqdeen kuwo lagu qoslo kulankii xalay dhex maray kooxaha Sheffield United iyo Red Devils.
Manchester United ayaa barbaro la soo gashay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay ku kala baxeen 3-3, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Manchester United ayaa haatan kaga jirta booska 9-aad miiska kala sareynta Premier League, iyagoo leh 17 dhibcood, waxayna 20 dhibcood nadiif ah u jiraan hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool.
Haddaba Gary Neville oo la hadlay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa wuxuu yiri:
“Dhaq-dhaqaaqa ay sameynayeen Marcus Rashford, Anthony Martial iyo Daniel James, wuxuu u muuqday qaab qosol ah”.
“Sedexda weeraryahan ee Manchester United waxay u muuqdeen kaftan wax walba ee ku saabsan ciyaarta oo dhan”.
“Khadka dhexe ee Manchester United waa daciif, laakiin waxaad ka filaysaa qaab ciyaareed ka wanaagsan kan seddexda weerarka ee kooxda”.
“Haddii aan ka codsado macalinka kooxda Sheffield United ee Chris Wilder inad kula gor-goronto xiddigaha David McGoldrick iyo Mousset, si aad ugu badelato Martial iyo Rashford, runtii wuu diidi lahaa”.